Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah – Halkan guji si aad u bilowdo gaabinta URL-ka.
Halkan guji si aad u bilowdo gaabinta URL-ka.
Gaabiye URL oo leh falanqeyn, bartilmaameed dhul, raadinta xiriirinta, API, iskuxirka bulk-ga oo laga soo gaabiyo feyl, iyo ka-hortagga khayaanada ee barnaamijyada xiriirka la leh.
https://shortest.link Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Nidaamkan asturnaanta waxaa loo soo uruuriyay si wanaagsan loogu adeego kuwa ka welwelsan sida ‘Macluumaadka Shaqsi Lagu Aqoonsan Karo’ (PII) loogu isticmaalo internetka. PII, sida lagu sharaxay sharciga asturnaanta Mareykanka iyo amniga macluumaadka, waa macluumaad loo isticmaali karo kaligeed ama macluumaad kale si loo aqoonsado, loola xiriiro, ama loo helo hal qof, ama loo aqoonsado shaqsi macnaha ku jira. Fadlan si taxaddar leh u akhri siyaasadeena asturnaanta si aad u hesho faham cad oo ku saabsan sida aan u ururino, u isticmaalno, u ilaalino, ama haddii kale u maareyno Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed ee Aqoonsiga leh iyadoo la raacayo degelkeenna.
Macluumaad noocee ah ayaan ka aruurinaa dadka booqda bartayada, degelkeena, ama abka?
Markaad dalbaneyso ama iska diiwaangelineyso degelkeenna, sida ku habboon, waxaa lagu weydiin karaa inaad gasho Url-kaaga Dheer, Url gaaban, ama faahfaahin kale si ay kaaga caawiyaan khibradaada.
Goorma ayaan ururinaa macluumaadka?
Waxaan kaa soo aruurineynaa macluumaadka markii aad foom buuxiso ama aad macluumaad ku qorto bartayada.
Sideen u isticmaalnaa macluumaadkaaga?
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka aan kaa soo aruurineyno markii aad isdiiwaangeliso, wax iibsato, aad iska qorto joornaalkeenna, ka jawaabno sahan ama isgaarsiin suuqgeyn ah, marinno websaydhka, ama u isticmaalno qaababka kale ee bogagga qaababkan soo socda:
• In la horumariyo degelkeena si aan si fiican kuugu adeegno.
Uma isticmaalno iskaanka u nuglaanta iyo / ama iskaanka heerarka PCI.
Kaliya waxaan bixinnaa maqaallo iyo macluumaad. Marnaba ma weydiisan karno lambarrada kaararka deynta.
Waxaan u isticmaalnaa Scanning-ka Malware-ka caadiga ah.
Macluumaadkaaga shaqsiyeed wuxuu ka kooban yahay shabakadaha la sugay waxaana kaliya marin kara dad kooban oo leh xuquuq gaar ah oo marin loogu helo nidaamyada noocaas ah, waxaana looga baahan yahay inay ku xafidaan macluumaadka qarsoodi ah. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan macluumaadka xasaasiga ah / amaahda ee aad bixiso waxaa lagu kaydiyaa tiknoolajiyada Secure Socket Layer (SSL).
Waxaan hirgelineynaa tallaabooyin kala duwan oo xagga amniga ah markii adeegsadehu galo, soo gudbiyo, ama uu galo macluumaadkooda si loo ilaaliyo badbaadada macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Dhammaan macaamillada waxaa lagu farsameeyaa iyada oo loo marayo adeeg bixiyaha albaabka mana ku kaydsan yihiin ama laguma shaqeynayo server-keena.
Ma isticmaalnaa ‘cookies’?
Haa. Kukiyada waa faylal yar yar oo degel ama adeeg bixiyahoodu u wareejinayaan dariiqa adag ee kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya biraawsarkaaga shabakadda (haddii aad oggolaato) taas oo u oggolaanaysa nidaamyada goobta ama adeeg bixiyaha inay aqoonsadaan biraawsarkaaga oo ay qabtaan oo xusuustaan macluumaadka qaarkood. Tusaale ahaan, waxaan u isticmaalnaa buskudka inay naga caawiso inaan xusuusano oo aan ka shaqeyno waxyaabaha ku jira gaadhigaaga wax iibsiga. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa inay naga caawiyaan inaan fahamno dookhaaga ku saleysan waxqabadkii hore ama kan hadda socda, kaasoo noo suurta geliya inaan ku siino adeegyo hagaagsan. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa cookies si ay nooga caawiso isku dubaridka xogta guud ee ku saabsan taraafikada goobta iyo isdhexgalka goobta si aan ugu soo bandhigno khibradaha goobta iyo qalabka mustaqbalka.
Waxaan u adeegsanaa cookies si:
• La soco xayeysiiska.
• Isku-dubbarid xog guud oo ku saabsan taraafikada goobta iyo isdhexgalka goobta si aad u siisid khibrado iyo agab wanaagsan oo mustaqbalka ah. Waxaan sidoo kale adeegsan karnaa adeegyo dhinac saddexaad oo la aamini karo oo dabagala macluumaadkaan annaga oo metelayna.
Waad dooran kartaa in kombiyuutarkaagu kuu digo mar kasta oo cookie la dirayo, ama waxaad dooran kartaa inaad damiso dhammaan buskudka. Waxaad ku samaynaysaa iyada oo loo marayo dejinta biraawsarkaaga. Maaddaama biraawsarku waxyar ka duwan yahay, fiiri Mashiinka biraawsarkaaga si aad u barato habka saxda ah ee wax looga beddelayo cookies-kaaga.
Haddii aad damiso cookies-ka, Qaar ka mid ah astaamaha ka dhigaya khibradaada bartaada mid wax ku ool ah ayaa laga yaabaa inaysan si sax ah u shaqeyn. Saamayn kuma yeelan doonto waaya-aragnimada isticmaale ee ka dhigaya khibradaada bartaada mid wax ku ool ah oo laga yaabo inaanay si habboon u shaqeyn.
Kama iibinayno, ka ganacsanayno, ama si kale ugu wareejinaynno dhinacyada ka baxsan Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed ee Shakhsi ahaaneed mooyee illaa aan siino dadka isticmaala ogeysiis hore. Tani kuma jiraan boggaga martigelinta websaydhada iyo dhinacyada kale ee naga caawiya ka shaqeynta degelkeenna, qabashada ganacsigeenna, ama u adeegidda isticmaaleyaasheena, illaa iyo inta ay dhinacyadaas oggolaadeen inay macluumaadkan sir ka dhigaan Waxaan sidoo kale sii deyn karnaa macluumaadka markii la sii daayo ay ku habboon tahay in loo hoggaansamo sharciga, aan dhaqan galino siyaasadaha boggayaga, ama aan ilaalino annaga ama kuwa kale xuquuqdooda, hantidooda ama nabadgelyadooda.
Si kastaba ha noqotee, macluumaadka soo-booqdaha ee aan shakhsi ahaan lagu aqoonsan karin ayaa loo siin karaa dhinacyada kale suuqgeynta, xayeysiinta, ama adeegsiyada kale.
Xiriirinta dhinac saddexaad
Mararka qaarkood, marka loo fiirsado, waxaan ku dari karnaa ama ku bixin karnaa badeecado ama adeegyo dhinac saddexaad ah degelkeenna. Kuwani bogagga saddexaad waxay leeyihiin siyaasado gaar ah oo madax-bannaan oo gaar ah. Annagu, markaa, mas’uuliyad iyo mas’uuliyad nagama saarno nuxurka iyo waxqabadyada bogagga isku xiran. Si kastaba ha noqotee, waxaan dooneynaa inaan ilaalino sharafta boggayaga waxaanan soo dhaweyneynaa wixii jawaab celin ah ee ku saabsan barahaas.
Waxaan sidoo kale ku raacsanahay Mabaadi’da Shakhsiga Dib-u-hagaajinta taas oo u baahan in shakhsiyaadku ay xaq u leeyihiin in ay si sharci ah u daba-galaan xuquuq la dhaqan-gelin karo oo ka dhan ah xog-ururiyayaasha iyo hawl-wadeennada ku guuldareysta in ay u hoggaansamaan sharciga. Mabda’aani uma baahna oo keliya shakhsiyaadka inay leeyihiin xuquuq la fulin karo oo ka dhan ah isticmaaleyaasha xogta, laakiin sidoo kale shaqsiyaadka waxay u baahan yihiin maxkamad ama hay’adaha dawladda si ay u baaraan iyo / ama u xukumaan u hoggaansamid la’aanta xogta.
Sharciga CAN-SPAM waa sharci dejinaya qawaaniinta emaylka ganacsiga, dejinaya shuruudaha fariimaha ganacsiga, wuxuu xaq u siinayaa dadka helaya in e-mayllada laga joojiyo in loo diro, waxayna qeexayaan ciqaab adag oo xadgudubyada ah.
Waxaan u aruurineynaa cinwaanka emaylkaaga si aan:
Si aan ula jaanqaadno CANSPAM, waxaan ku raacsanahay waxyaabaha soo socda:
• Ha isticmaalin maadooyin been ah ama marin habaabin ah ama cinwaanno emayl ah.
• Aqoonsiga fariinta u tahay xayeysiin qaab macquul ah.
• Ku dar cinwaanka jir ahaaneed ee meheraddeenna ama xarunta xarunta.
• La soco adeegyada suuq geynta emaylka ee dhinac saddexaad u hogaansanaanta, haddii mid la isticmaalo.
• Si xushmad leh u maamuus codsiyada ka-bixidda / ka-saarista.
• U oggolow isticmaaleyaasha inay ka baxaan rukhsadda adoo adeegsanaya xiriirka hoose ee emayl kasta.
Haddii wakhti kasta oo aad jeclaan lahayd inaad ka saarto diiwaangelinta helitaanka emayllada mustaqbalka, waxaad noogu soo diri kartaa emayl
abuse@shortest.link waxaana si dhakhso leh kaaga saari doonaa DHAMMAAN waraaqaha.
Nala Soo Xiriira
Haddii ay jiraan wax su’aalo ah oo ku saabsan siyaasaddan asturnaanta, waad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya macluumaadka hoose.
Tifatirihi Ugu Dambeeyay 2021-01-11
Tusaha gaagaaban ee URL
Sumadaha iskuxirka gaagaaban ee dalabaadka laga cabsado
Xullo astaamaha lagama maarmaanka ah
Yaraynta URL bilaa diiwaangelin
Gaaban URL gaabin
URL gaagaaban oo khaas ah
Kahortaga khiyaanada barnaamijyada kuxiran
Features: Raadinta xiriirinta
Soo gaabi URL bilaa xayeysiis
Halkan guji si aad u bilowdo gaabinta URL-ka. Proudly powered by WordPress